YAANYADA CHERRY: KORAAYA YAANYADA YARYAR EE AQALKA DHIRTA LAGU KORIYO - BEER CAGAARAN
Goobidda iyo daryeelidda yaanyada cherry ee lagu koriyo
Inta lagu jiro xulashada yaanyada for geedo mustaqbalka, bannaanka u bixiyaan fiiro weyn u leh dhadhan iyo sifooyinka tayada. Thanks to shaqo adag ee maanta, noocyo badan oo yaanyo ah ayaa la soo saaray in la buuxiyo dhammaan shuruudaha beeralayda. Waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo noocyo ah, yaanyada cherry gaar ahaan muhiim ah, iyo in kasta oo ay size ay yar yihiin waxay awoodaan inay ku aqoonsadaan labada beeralay oo waayo-aragnimo leh iyo bannaanka u ah.
Yaanyada cherry: sharaxaad kooban iyo noocyo ku haboon loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo
Yaanyada Cherry waxaa loo tixgeliyaa yar yar-fruited, maxaa yeelay miisaanka yaanyada waa 15-20 garaam oo keliya. Yaanyada Cherry waxay leeyihiin farqi weyn oo ka yimi yaanyo kale - sare u ah (ku dhowaad 2 jeer ka badan) macaanka sonkorta iyo nafaqooyinka qalalan. Dhamaantood waxaa lagu kala diri karaa casiir ka baxsan. Marka la barbardhigo dhiggooda waaweyn, dhadhanka yaanyada cherry waa macaan oo aad u xoog badan.
Sababtoo ah nidaamka xididkeeda, yaanyada cherry ayaa si fudud loogu kori karaa guriga balakoonka ama windowsill, iyo sidoo kale in dheryaha ubaxa caadiga ah (xaqiiqda waxaa badanaa lagu tilmaamay sharaxaadda kala duwan). Yaanyadaas ma koraan hal mid, laakiin waa kooxo oo dhan, taas oo si weyn u fududaynaysa goosashada. Waxay haystaan ​​nolol shaf ah oo ay ku jiraan inta aysan si xun u jajabin ama jabin.
Ma taqaanaa? Magaca "Cherry" noocyo kala duwan oo yaanyo ah waxay u egtahay mid la mid ah oo la mid ah berry ee cherry.
Yaanyada Cherry waxay u taagan yihiin guryaha cuntada. Waxay xoojinayaan nidaamka wadnaha, waxay caadi u yihiin dheef-shiid kiimikaad waxaana loo isticmaalaa ka hortagga kansarka.
Intaa waxaa dheer, shaqo badan oo xulasho ah ayaa horseeday xaqiiqda ah in yaanyo kala duwan oo noocaan ah ay leeyihiin dhadhan aan caadi ahayn iyaga. Sidaas, cherry ugu macaan ayaa siin kara dhadhan ah strawberries, raspberries, nutmeg iyo blueberries.
Wixii sii kordhaya ee lagu koriyo ah ku haboon yihiin noocyo faaqid iyo tallaabooyin ah ee yaanyada cherry. Ka mid ah Noocyada kala duwan ee la kala goyn karo ayaa lagu aqoonsan karaa:
"Ampel" - noocyo qurxin oo caan ah oo caan ku ah caabuqa cudurada kala duwan.
F1 "Raisin" - waa noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah. Haysashada midab yar yar, midh oral ah oo midab casaan ah.
Noocyo Tallaalka ku habboon koritaanka ee xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo waa:
F1 "Punto-7" - waa gardarrada hore ee kuleylka ah ee lagu koriyo miraha casaanka ah;
"Chines Pink" - waa mid aad u wanaagsan ciidda difaaca;
"Cherry madow." Muuqaalkiisa ugu weyni waa yaanyada yaryar ee hammaan, miro madow;
F1 "Cascade Magic". Kala duwanaan yaanyo cherry ah ayaa la koray guusha weyn ee labadaba lagu koriyo iyo beerta furan;
"Macmacaan". Xilligan, mid ka mid ah noocyada ugu caansan koray koriyo oo. Miraha waxay leeyihiin hannaan casaan ah;
F1 Yellow-Mimi waa gardaro jilicsan oo lagu koray koriyo;
F1 "Madeira" iyo F1 "Caprice" - isbarbar dhiga kuleylka bartamihii bartamihii miraha cas.
Khamriga iyo boric acid waxaa loo isticmaali karaa dharka ugu sarreeya ee yaanyada, kaas oo yaraynaya khatarta ah caabuqa dabaysha goor dambe.
Geedi socodka ah ee yaanyada sii kordhaya ee cherry aqalka dhirta lagu koriyo ah ma aha mid aad u adag, waxa ugu weyn ee - ilaalinta xeerarka qaarkood, kuwaas oo laga wada hadli doono hoos. Haddii aad u qalabaysan tahay aqalka dhirta lagu koriyo oo kuleylka leh, markaa waxaa suurtogal ah in la gooyo dalagyo yaryar oo yaryar oo sanadle ah. Waxyaabaha laga helo dhirta noocan oo kale ah waxaa lagu dhajiyaa polycarbonate ama muraayadda.
Bannaanka u badan ayaa ku guulaystay guulo badan oo ka mid ah guushan taasina waxay u beddeshay beeritaanka yaanyada cherry ee aqalka dhirta lagu koriyo ee ganacsiga oo buuxa, oo keena faa'iido wanaagsan.
Qoyaanka hawada iyo heerkulka
For yaanyada cherry, heerkulka cimilada ugu fiican ee lagu koriyo waa + 20 ... +25 ° C inta lagu jiro maalintii iyo + 16 ... +18 ° C - habeenkii. Ka dib marka midhaha bilaabaan inay ku shubaan, heerkulka aqalka dhirta lagu koriyo waa inuu u dhexeeyaa + 24 ... +26 ° C inta lagu jiro maalintii iyo + 17 ... +18 ° C habeenkii.
Yaanyada Cherry, gaar ahaan noocyada aqalka dhirta lagu koriyo, waxay u baahan tahay hawo qoyan oo ku filan, sidaas darteed qoyaanku waa inuu ahaado 60-65%. Intaa waxaa dheer, liiska tallaabooyinka khasabka ah ee daryeelka ee tamaandhada ee lagu koriyo waxaa ka mid ah airing joogto ah ee qolka. Habkani wuxuu si gaar ah muhiim u yahay inta lagu jiro ubax.
Xilligan oo ah horumarinta yaanyada ku dul yaal derbiyada aqalka dhirta lagu koriyo kiis kasta ha ahaadee inaysan sameynin gogol. Sidoo kale xasuuso in qoyaanka ciidda xad-dhaafka ah ay kordhin doonaan kiimikada iyo biyaha ka yimaada hilibka yaanyo.
Ma taqaanaa? 1973 waxaa loo tixgelinayaa inay tahay sannadka "dhalashada" ee kala duwan ee cherry. Waxay ahayd sanadkan oo ah in reer binu Israa'iil ay soo bandhigeen noocaan aan caadi aheyn ee dadweynaha guud.
Nalalka aqalka dhirta
Nalalka, oo ay weheliyaan qoyaan iyo heerkulka, waa mid ka mid ah xaaladaha asaasiga ah ee yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo. Noocyo Cherry waxay u baahan yihiin iftiin wanaagsan, markaa marka aad dooranayso meel loogu talagalay dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad u baahan tahay inaad ka qaadato arrintan xisaabta.
Haddii iftiinka iftiinkiisu uu daciif yahay, markaa waxaad u baahan doontaa in aad geedo ka baxdo meel fog oo ka mid ah midba midka kale si looga fogaado hooska. Sidaa darteed, xitaa tiro yar oo duurka u leeyihiin in ay qaataan aag ballaaran oo lagu koriyo ah.
Daryeelka saxda ah ee yaanyada cherry waa mid aan la iloobi karin iyada oo aan abaabin iftiin fiican, sababtoo ah iyada oo aan iftiin lahayn iftiinka horumarinta yaanyada waxay noqon doontaa mid gaabis ah, caleemuhu waxay noqon doonaan ciriiri, afkuna wuu kala bixi doonaa, iyo burooyinkuna waxay gebi ahaanba dhici doonaan.
Si kor loogu qaado koboca wanaagsan ee tamaandhada xaaladaha aqalka dhirta, nalalka dabiiciga ah waa qalabaysan, taas oo ah mid u dhow sida ugu macquulsan dabeecadaha dabiiciga ah.
Nalalka dabiiciga ah ee yaanyada cherry ka kooban yahay afar qaybood oo waaweyn:
Istaag - naqshad, kaas oo ku xiran duurka iftiinka.
Qalabka korontada ku shaqeeya - qayb ka ah xakamaynta tamarta hoose ee hadda jirta.
Reflector - saxan kor u qaadaya socodka iftiinka uu soo saaro yaanyada. Sidoo kale waxay xakameysaa heerkulka kuleylka ay ka dhalato nalalka.
Yaanyada cherry, beeritaanka iyo daryeelka iyaga loogu talagalay oo kaliya in ciidda cusub. Sannadkii hore kuma haboona arrintan. Si loo yareeyo suurtogalnimada in la horumariyo cuduro kala duwan, iyo sidoo kale in la kordhiyo bacriminta carrada iyo hagaajinta qaabkeeda, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro peat si. Badanaa, waa ku filan inaad ku darto hal baaldi oo ah peat ilaa hal mitir siman oo ciid ah. Haddii loo baahdo, peat waxaa lagu beddeli karaa balka ama humus.
Talooyin diyaarinta ciidda:
Haddii aad isticmaasho humus, markaa waxaad u baahan tahay in aad ka qaadato qashinka oo dhan (haraaga dhirta aan loo baahnayn, iwm);
Waxaad isticmaali kartaa balka cusub, iyo sanadlaha, kuwaas oo horeyba u bilaabay inay waxyeello u geystaan;
Si aad u bixiso aeration ka wanaagsan oo kordhiya dabacsanaanta ciidda, waxaad ku dari kartaa baaldi kala badh ciid ah halkii mitir laba jibbaaran oo carrada.
Roobidda yaanyo cherry ah oo lagu koriyo
Tiknoolajiyada beeritaanka yaanyo yaryar oo yaryar ah waa wax aan ka duwaneyn beerashada yaanyada caadiga ah. Waxaa la fulin karaa, iyo sidoo kale in seedling, iyo si toos ah ee dhulka furan. Tiknoolojiyada beeraha waxaa loo qaybin karaa dhowr marxaladood.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dhulka. Waa preheated oo lagu daaweeyaa daawooyinka EM (daawooyinka ay ku jiraan maadooyinka waxtar leh). Qofka ugu caansan waa macnaha "Baikal". U muuqaalka kore ee caleemaha ugu horeeya waxay dhacaan 5-10 maalmood kaddib marka la beero.
Waa muhiim! Iyada oo dhammaan sharciyada beerto, dhalidda sare ee yaanyada cherry waa in 2 sano ee ugu horeeya.
Waqtiga beeritaanka iyo abuurka abuurka
Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu beerayo yaanyo ku yaal aqalka dhirta lagu koriyo waa dhammaadka bisha Maarso ama bilowga Abriil. Haddii aad doorato abuurka noocyo qalaji ah beerashada lagu koriyo, markaa waxaad ka hortagi kartaa shaqadooda hordhaca ah. Awoodaha noocan oo kale ah isla markiiba dhulka ayay dhulka ku jiraan. Haddii aad dooratay kala duwan ee caadiga ah ee cherry, ka dibna miraha u baahan tahay si loogu diyaariyo beeritaanka soo socda. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay:
Si taxadar leh u duub dhamaan abuurka bacad yar oo ah dhar dabiici ah oo dabiici ah, ka dibna jeermiska. Tani, bacda waxaa la tuuraa 15 daqiiqo ilaa xal 1% oo ah kiniinka potassium.
Si fiican u biyo raaci bacriminta.
Nidaamka nafaqeynta xalka oo dhan qalab beerto. Si aad u diyaariso xalka, waxaad u baahan tahay inaad qaadato litir biyo ah oo ku dar qaado qaado qoryo qoryo ah. Heerkulka xalka waa inaanu hoos udhicin + 25 ° C. Waqtiga joogitaanka miraha ee xalkan waa 12 saacadood, ka dibna waxaad sii wadi kartaa marxaladda xiga.
Mudo 24 saacadood ah, ku rid boorsada miraha ku jira weel biyo nadiif ah.
Qalaji abuur, ka dibna ku rid qaboojiyaha, halkaas oo ay sii joogi doonaan ilaa laga beerto.
Ka dib markii miraha cherry geedka cherry ka gudbaan marxaladahaas oo dhan, waxaad bilaabi kartaa iyaga beeridda dhulka.
Sida loo beero yaanyada
Si loo helo goosashada wanaagsan ee yaanyada cherry, beerahooda, iyo gaar ahaan beereed, waa in lagu fuliyaa si waafaqsan sharciyada fudud. Beeridda ayaa ku bilaabmaysa xaqiiqda ah in sanduuqyada yaryar laga sameeyo dusha ciidda, hal iyo badh centimeter qoto dheer.
Seeds ayaa la doorbidaa si habeysan, oo leh fogaan ah 50-60 sentimitir inta u dhaxaysa dhirta. Goobo badan oo naadir ah ama aad u badan ayaa keeni kara hoos u dhac muuqda ee dhalidda. Taas ka dib, godadka waxay u baahan yihiin in lagu boodo ciid iyo biyo iyaga. Si looga fogaado nabro-boodhaha, waxaad isticmaali kartaa buufin.
Korodhka degdegga ah ee abuurka wuxuu ku kordhin doonaa heerkulka + 26 ... +27 ° C iyo nalalka ugu yaraan toban saacadood maalintii. Inta lagu jiro muddadan, waxaad u baahan tahay inaad ciidda si fiican u waraabiso oo kaliya haddii ay bilaabato in ay qalalaan. Tani waxay socotaa 20-25 maalmood, ilaa labada caleemood oo run ah soo baxaan.
Daryeelka aqalka dhirta
Wixii bannaanka u janjeersaday, su'aasha ah sida loo daryeelo yaanyada cherry waa arrin aad u daran. Daaweynta tamaandhada waxay ka bilaabataa ururinta waraabinta saxda ah.
Kala duwanaantani uma dulqaadanayso abaar, sidaas darteed, iyadoo maqnaansho dheer oo qoyaan ah, miraha waxay bilaabi doonaan inay jabaan oo ay sii xumaadaan. Tani waxay ka dhigan tahay in dhirtu u baahan tahay in maalin kasta la waraabiyo. Laakiin waqti isku mid ah waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero heerka qoyaanka, sababtoo ah iyada oo ay bixiso, dhirta si tartiib tartiib ah u bilaabi kallana.
Cherry ayaa sidoo kale u baahan tahay in la xiro, sababtoo ah waxaa sabab u ah culeyska gaarka ah, yaanyada sii kordhaya on laanta a jebin karo iyo dhulka ku dhici.
Ma taqaanaa? Miisaanka ee yaanyada cherry tiniest kama badna 10 garaam.
Isdhexgalka daryeelka ee abuurka lagu beeray
Daryeelka abuurka lagu beeray waxaa ka mid ah:
Ku waraabinta ciidda biyo diirran isla markiiba ka dib markaad abuuraysid abuurka (sida qaabsocod fudud oo wax ku ool ah).
Sprouts ka dib marka ay gaaraan 5-6 sentimitir dhererka. Haddii aaney miraha korin, habka waa in dib loo dhigaa.
Xakamaynta joogtada ah ee ciidda, helitaanka hawada ee abuurka.
Kordhinta marxalado leh Bacriminta macdanta adag (oo la qabto hal toddobaadkii).
Su'aasha ah "Sida loo koro oo loo daryeelo yaanyada cherry ka dib markaad beerto?", Diiradda ugu weyni waa inay ahaato waraabinta iyo xakamaynta heerkulka. Fikrad gaar ah waa in la bixiyaa tan tan saddexda usbuuc ee ugu horreeya ka dib soo bixitaanka. Heerkulka maalintii waa in uu ahaado + 16 ... + 18 ° C, iyo habeenkii waa inuu ahaado + 13 ... +15 ° C. Daryeelka noocaas ah waa in la sii wadaa ilaa caleen labaad ay ka muuqato bamka.
Si looga hortago iyo daaweynta cudurada yaanyada, isticmaal fungicides: Abiga-Pik, Fundazol, Titus, Fitosporin-M, Quadris, Skor, Alirin-B, Strobe.
Waraabinta geedo of yaanyada cherry waa in ay si toos ah hoos ugu xidid leh biyo diirran, heerkulka taas oo noqon waa +20 ° C. Sidoo kale, dhirta waa inay helaan qadar ku filan iftiinka. Isla mar ahaantaana waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo hawo joogto ah ee lagu koriyo.
Si ay u koraan baadiyaha xooggan ee yaanyada cherry, gaar ahaan noocyo "Faraha", waxaa lagama maarmaan ah in laga gooyo qaybta sare ee warshadda. Ka dib marka caleemaha ka soo baxaan axooyinka caleen hoose, waxaad u baahan doontaa inaad ka tagto oo keliya labada sare, oo ka saar kuwa hoose. Tani waxay sababtaa, dhirta waxay sameysmi doontaa 2 caleemo, taas oo markaa ku xiran kartaa trellis ah.
Xeerarka daryeelka ee yaanyada qaangaarka ah
Daryeelka yaanyada bislaado waxaa loo yareeyaa hababka soo socda:
Kadib horumarinta caleen shanaad oo run ah, yaanyada cherry loo wareejiyo hab cusub oo waraabinta. Hadda ciidda waa qoyaan 3-4 jeer wiiga. Waxa ugu muhiimsan - kormeer joogto ah ee dheelitirka qoyaanka.
10-12 maalmood oo kasta waxaad u baahan tahay inaad quudiso yaanyada, macdanta iyo bacriminta organic. Kaliya ha badin, sababtoo ah fara badan oo nafaqada ah ee ciidda waxay horseedi kartaa kobaca degdegga ah ee cagaarka, taas oo ka hortagi doonta samaynta miraha cusub.
Marka ciidda ay hoos u dhacdo geedka, waxaa lagama maarmaan ah in si tartiib tartiib ah loogu shubo lakabka substrate cusub.
Si loo hubiyo pollination ka fiican, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo dhirta ubax 2-3 jeer toddobaadkii.
Si gaar ah waxaa lagama maarmaan ah in la yiraahdo ku saabsan pinning of yaanyada cherry. Dalladaha dheeraadka ah waxay u baahan yihiin in la moodo. Si arrintan loo sameeyo, gacanta ayaa u jebineysa carruurta kore, oo kaliya dhar dhuuban 1.5-2 centimitir sare. Sababtoo ah tan, koritaanka caleemaha ugu weyn ayaa la kicin doonaa iyo dhalid guud ee baadiyaha kor u qaadi doonaa.
Ka dib markii uu dhirta uu sameeyay qayb weyn oo ah ugxan-yaryar, waa inaad jebisaa dusha sare ee ugu muhiimsan iyo jeexa buraashka ubaxa. Si sax ah u xoqdo waxay keeni doontaa Bisaylkiisa deg deg ah ee midhaha. Sidaa darteed, su'aasha ah sida yaanyo cherry strawberry loo tixgelin karo in la xiro.
Ma yaanyo yaryar oo ku xiran cayayaanka iyo cudurada aqalka dhirta lagu koriyo?
Cayayaanka iyo cudurrada waxay keenaan dhibaatooyin badan oo ku saabsan beerashada aqalka dhirta lagu koriyo ee yaanyada. Sidoo kale cayayaanka xayawaanka, sheygaaraha kala duwan - cudurada ba'an ayaa keena waxyeelo wayn oo yaanyo ah. Marka loo eego fasalka, dhammaan wakiilada keena cudurrada yaanyo cherry ah ayaa loo qaybin karaa fungal, viral iyo bakteeriyo.
Cayayaanka cayayaanka, oo ay weheliyaan dhirta fangaska iyo bakteeriyada, waxay ku nool yihiin waxyaabaha ka mid ah aqalka dhirta lagu koriyo, carrada iyo harta dhirta qallalan. Si looga hortago dhacdooyinka iyo faafidda cayayaanka iyo cudurrada, talaabooyinkan soo socda ayaa la adeegsadaa:
Yaanyada cherry lama beeray dhow baradho.
In lagu koriyo waxaad ku kori kartaa noocyo dhowr ah oo yaanyo.
Markaad ka shaqeyneyso dhirta aqalka dhirta lagu koriyo, waa in la raaco tallaabooyin nadiif ah oo fudud: dhaqdhaqaaq joogto ah oo saabuun leh, qalab gacmeed (majarafadaha, tuubooyinka, majarafadaha, iwm.).
Waa muhiim! Si looga hortago in cudurada kala duwan, geedo of yaanyada dheer oo isla markiiba ka dib markii la beero waxay u baahan yihiin in lagu daaweeyo daroogada "Hom".
Tamaandho ayaa isla markiiba goostay ka dib markii ay Bisaylayso. Muddadan, waxay leeyihiin dhadhanka ugu fiican. Yaanyada cherry waxay ku habboon yihiin in ay ururiyaan burushyada oo dhan. Si arrintan loo sameeyo, si taxadar leh u gooyaan, ka dibna waxay ka soo baxaan mid ka mid ah burushka laftiisa.
Waxaad sidoo kale soo qaadan kartaa yaanyada cagaaran, ka dibna waxaa la gelinayaa sanduuqa kartoonka. Lakab kasta waxaa lagu duugay wargeys caadi ah, ka dib markii sanduuqa la dhigo meel gudcur ah oo tamaandhadu ku bislaadaan.
Waa muhiim! Sanduuqa dhexdiisa, yaanyada waxay ka daadiyaan wax ka sii badan sariirta.
Yaanyada Cherry waa door wanaagsan oo loogu talogalay bannaanka u bilowga iyo sidoo kale beeralayda khibrad leh. Kala duwan ee kala duwan iyo dhadhanka aan ka tagi doonaa cid kasta oo indho la'aan ah. Isku day in aad tayadaas ku koriso goobtaada, waxaadna ku qanacsan tahay natiijada.